संगत गुनाको फल- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक १६, २०७६ बालिका थपलिया
‘तिमी यस नेपालमा खेर गइरहेका नदी सरह हौ,’ श्रीमान् गोविन्दराज भट्टराईले आफूलाई यस्तो वाक्य प्रयोग गरेपछि अञ्जनाको मनमा काँडा बिझेझैं भयो  । यही वाक्यले उनलाई नियात्राकार पनि बनायो  ।
केही लेखेर देखाउन मन लाग्यो । उनको क्षमताले उनलाई चुनौती दियो । त्यसपछि उनले ‘जीवनका घुम्ती र देउरालीहरू’ नामक कृति जन्माइन् । ‘यात्रामा पनि ठूलो शिक्षा लुकेको हुँदो रहेछ’ अञ्जना आफनो आत्मसंस्मरणमार्फत् यही वास्तविकतालाई प्रस्ट्याउन चाहन्छिन् ।
उनले कृतिको सुरुवातमा ताप्लेजुङको महत्त्वलाई बयान गर्दै ‘ताप्लेजुङ यात्राको संयोगले ब्युँझाएका सम्झनाका पत्रहरू’ शीर्षकको संस्मरण लेखेकी छन् । त्यो ठाउँ उनको श्रीमान्का पुर्खाहरूको थातथलो पनि हो । दोस्रो लेखले इलामको महत्त्वलाई दर्सार्एको छ । जहाँ उनले इलामको शैक्षिक र प्राकृतिक महत्त्वको चर्चा गरेकी छन् । तेस्रा नियात्रामा उनले नगरकोटको प्राकृतिक सुन्दरताको बयान गरेकी छन् ।
चौथो संस्मरणमा उनले श्रीलंका यात्राबारे लेखेकी छन् । राष्ट्रसंघको महासभाका निम्ति उनलाई जाने अवसर मिलेको थियो । कोरिया भ्रमण गर्दा सियोल, ग्वाङ्जु, मोक्पो, दक्षिण कोरियाको दक्षिणी सिमाना आदि ठाउँ घुम्दाको अनुभवको बयान गरेकी छन् ।
परिवारसँग भारत भ्रमण गर्दा अनि धार्मिक स्थलमा जाँदा उनले गरेको अनुभवलाई यसरी व्यक्त गर्छिन्, ‘शक्तिका प्रतीक देवीस्थलहरू किन उचाइमा हुँदा रहेछन् ? शक्तिछेउ पुग्न सजिलो हुँदैन, कडै परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर होला त ।
हुन त अन्य कति देवताका मन्दिर पनि चुचुरामा हुन्छन् । उदाहरणस्वरूप नेपालको मुक्तिनाथ, भारतको बद्री केदारलाई लिन सकिन्छ तर उचाइमा हुने देवीस्थलको संख्या अन्यको तुलनामा बढी नै देखिन्छ ।’ त्यसपछि उनी अमेरिकाको नेब्रास्का जाँदा घुमेका विभिन्न ठाउँको बारेमा आफनो अनुभव लेख्छिन् । त्यहाँको युनिभर्सिटी, पुस्तकालय, फार्मर्स मार्केट, चिडियाखाना, बेलेभ्यु विश्वविद्यालय, प्रविधि विभाग, ग्यालप, डेरी, स्टेट क्यापिटल, स्ट्राटेजिक एयर कमाण्ड म्युजियम, वासिङटन, स्टेट डिपार्टमेन्ट र क्यापिटल हिल आदि ।
‘मोक्पो राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको निमन्त्रणा’ शीर्षकको संस्मरणमा कोरिया यात्राको बारेमा लेखेकी छन् । यात्राको क्रममा भेट भएकी एउटी पाकी महिलाले जुस पिएका ग्लासलाई टिसुले पुछपाछ पारेर आफ्नो ब्यागमा खुसुक्क छिराएको देख्दा मानवीय स्वभावमा समानता भएको अनुभव गर्छिन् लेखक ।
मानवीय स्वभावलाई जाति, धर्म, भाषा, भूगोलले अन्तर नल्याउने उनको ठम्याइ छ । अर्को संस्मरण ‘एक आकस्मिक यात्रा’ मा जीवनका आरोह–अवरोहलाई यसरी परिभाषित गरेकी छन् ‘आरोह–अवरोह जीवनका अभिन्न गहना हुन् । कुन क्षण के हुन्छ सधैं अनिश्चित ।’ यसभित्र उनले आफूलाई मुटुको समस्या हुँदा झेलेको समस्या र उपचारको बारेमा उल्लेख गरेकी छन् । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा नयाँदिल्लीमा गएर मुटुको उपचार गरेको बारेमा उनले यसमा उल्लेख गरेकी छन् ।
आफ्नी छोरीसँग थाइल्यान्डमा यात्रा गरेको प्रसंगलार्ई उनले ‘थाइल्यान्डको पर्यटकीय यात्रा’ शीर्षकको संस्मरणमा सम्झना गरेकी छन् । यस कृतिमा समेटिएको अन्तिम संस्मरण ‘दिल्लीको अस्पताल बसाइ र पठन’ मा आफ्ना श्रीमान् बिरामी भएर भारतको अस्पतालमा उपचार गराउँदाको समयलाई अभिव्यक्त गरेकी छन् ।
सरल लेखनशैलीमा जीवनको गहनतालाई अञ्जना वस्तीले आफ्नो पुस्तकमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।
आफ्नो जिन्दगीका भोगाइलाई शालीन शैलीमा उत्खनन् गरेकी छन् । यसलाई ओरिएन्टल पब्लिकेसनले प्रकाशित गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा परिवारको महत्त्व अतुलनीय हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई लेखकले प्रस्ट्याएकी छन् । ‘यात्रा अनन्त ज्ञानको स्रोत हो’ यो भनाइलाई उनले आफ्नो लेखनमा उतारेकी छन् ।
साहित्यिक परिवारसँग नाता जोड्न पुगेकी र आफू पनि लामो समयसम्म त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन क्षेत्रमा संलग्न रहेकी उनी संगतबाट लेखक भएको यथार्थलाई आफ्नो लेखाइमार्फत् उजागर गर्छिन् ।
प्रकृति र मानवको सहचेतनाको उडान
कार्तिक १६, २०७६ रजनी ढकाल
पर्यावरणीय चेतनाको उच्चबोध गर्दै पक्षी, मानिस तथा अन्य प्राणी र वनस्पतिसहितका अनेक कथामा ‘हंस’ उपन्यास संरचित छ  । मानिस, जनावर, पशुपक्षी र वनस्पतिका अनेक संवेदनासहित फरक शैलीमा बुनिएको यस आख्यानले मानवीय ‘हंस’ मा अपुग रहेका अनेक चेतनाका तहलाई पनि खोलेको छ  ।
उपन्यासले आख्यानको संरचनाबाट चरासहित अन्य मानवेतर प्राणीका कथालाई उभ्याउँदै मानवीय चेतनाको तहलाई फराकिलो पार्ने दृष्टिकोण पनि पेस गरेको छ । मानवीय मनसोरवरमा सम्बन्धका अनेक संकुचन छन् । ती संकुचनलाई चरा तथा सरिसृपका अनेक कथाबाट व्यंग्य गर्दै मानिस आफैंले बनाएको समाज र सभ्यताको माकुरे जालोमा कसरी प्रताडित छ भन्ने यथार्थ बोलेको छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नियमका अनेक जालोमा आजको मानिसको स्वतन्त्रता बन्दी छ तर पनि मानिस आफ्नो सभ्यता र उपलब्धिको गुड्डी हाँक्छ अनि भौतिक सुखको खोजीमा ताहुरमाहुर गरिरहन्छ । उपन्यासमा चरा जति पनि स्वतन्त्र हुन नसक्ने लुगा लाउने मानिस (आवरणमा मात्र रमाउने, भित्री सुख नभेट्ने) देखेर हाँस, गाड्यौला र सर्पहरू पनि व्यंग्य गर्छन् ।
म पात्रको जीवनको जालो परिबन्दमा परेको छ । समाख्याता म पात्र पत्नी सीमालाई अर्कैले लगेको झोंकमा हिंसात्मक मनोवृत्तिमा पुग्दै गर्दा आख्यानको आरम्भ हुन्छ । पढ्दै जाँदा म पात्र मात्र होइन उसको जार अनुज पाँडे पनि उस्तै परिबन्दमा परेर विसंगत जीवनको महाजालोमा बेरिएको हुन्छ । यी दुवैका कथासँग आप्रवासी अनुभव, प्रेम, विछोड, ईर्ष्या, हिंसा आदिजस्ता चरम नकारात्मक संवेगका अनेक सन्दर्भ आउँछन् । तर जति आउँछन् तिनले जीवनको विसङ्गत पाटोलाई मात्र उजागर गर्छन् । यसबाट वर्तमान जीवनको यथार्थबोध हुन्छ ।
पश्चिमा जीवनको भौतिकता र उपभोक्तावादी संस्कृतिको महाजालोमा फसेका दक्षिण एसियाली निमुखा नागरिक पात्रहरू समुन्नत र न्यायपूर्ण भनिएको समाजमा पनि शोषणमा नै परेका छन् । कमाइको लालसाले डो‍र्‍याएको जीवनले सधै जीवनलाई संकटको मझधारमा उभ्याएको छ । अवसरको थलो मानिएको अमेरिका मोहको आजको यथार्थ र त्यहाँ भासिएका जीवनको निरीहपनलाई उपन्यासले उधिनेको छ ।
वनस्पति, प्राणी र पक्षीका अनेक संवेदना बोकेको सञ्जीव उप्रेतीको यस आख्यानमा उड्ने हाँस र नउड्ने हाँसको प्रेमकथा रोचक छ । स्वैरकल्पनाको प्रयोगमा नागराजा, नागरानी र डोब्रे सर्पको त्रिकोणात्मक प्रेमको लोककथाले आख्यानमा अझ रोचकता थपिन्छ । टौदहको वास्तविक प्राकृतिक सेरोफेरोमा आख्यानको स्वरैकाल्पनिक बुनोट वास्तविकझैं भान हुन्छ ।
म पात्रको सीमासँग प्रेम सुरु भएको थलो टौदहमा हाँसहँसिनी, नागनागिनी आदिका प्रेमकथा जोडिएका छन् र समाख्याताले कथा भन्न रोजेको थलो पनि टौदह नै हो । पत्नी सीमालाई लगेको जारसँगको रोचक भेट पनि टौदहमा नै भएको छ । जारको घाँटी छिनाएर आत्मसन्तुष्टि लिन चाहने म पात्रको हिंसात्मक सोचसँगै कथाले यही ठाउँबाट गति लिएको छ ।
घटनाका अनेक उतारचढावमा हिंसा गर्न चाहने मपात्रको मनस्थितिको उथलपुथलसँगै कथा अझ कुतूहल बन्दै जान्छ । टौदहका किनारमा वृद्धाको सान्निध्य र उनीबाट सुनेका अनेक किंबदन्ती लोककथाका शैलीमा कथामा जोडिँदै जान्छन् नागनागिनी र हाँसहँसिनीका प्रेमकथाहरू बन्दछन् । परिवेशमा अनेक वनस्पतिको स्थिति र अन्य चराका सन्दर्भ पनि आउँछन् । उपन्यास त्यतिबेला अझ रोचक लाग्छ जतिबेला मानवप्रेम र पक्षी तथा नागनागिनको प्रेमका कथा उस्तैजस्ता लाग्छन् । आखिरमा प्रेम नै ब्राहृमण्डमा सबैले बुझ्ने साझा भाषा रहेछ !
यस आख्यानले पर्यावरणीय चेतनामार्फत् मानवीय हंसको संकुचन वा साँघुरो घेराको तुलनामा पक्षी वा हंसको फराकिलो जीवनशैलीको तुलना मात्र गर्दैन प्राकृतिक जीवनशैलीबाट विमुख हुँदै गएको मानव सभ्यताको समस्या र संकटलाई पनि संकेत गर्दछ । मानिसका मात्र कथालाई महत्त्व दिइने मानवीय सभ्यताको पृथ्वीमा अन्य प्राणीका पनि कथा हुन्छन्, तिनलाई हामीले सुन्न सक्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास गरेको छ यस उपन्यासले । अन्य प्राणीमा रहेको चेतनाकै कारण उनीहरूका बीच पनि सामूहिकता, समता र प्रेमका भाव छन् भन्ने कुरा कथाले पुष्टि
बकुल्ला र गँड्यौलाको एउटा संवाद :
‘...अनि आफ्नो थलो छाडेर अर्कै ठाउँमा जाँदा तिनेरु सजिलै जान पाउँदैनन् । तिनले कागज लिनुपर्छ ।’
‘कागज अरे !’ गँड्यौलाले अचम्म मान्दै सोध्यो ।
‘अर्काको ठाउँमा जान उनीहरूलाई कागज चाहिन्छ,’ बकुल्लाले भन्यो, ‘लुआ लाउनेलाई बाँच्नको निम्ति थुप्रै थरीका कागज चाहिन्छन् ।’
‘हो र ! कस्ता कागज ?’
‘आगरिकता, आस्पोर्ट, इसा, आलपुर्जा, खोई केके हो केके ! ...
‘बिचरा लुआ लाउनेको जीवन हामी भुइँहारा अड्यौलाहरूको भन्दा पनि कठिन रहेछ त !’ गँड्यौलाले भन्यो, ‘विचरा लुआ लाउनेहरूको कागजे जीवन ।’ (पृ. १९९) आख्यानले भाषाको साँघुरो घेरालाई नाघेर पक्षी र सरीसृपको भाषाको सिर्जना पनि गरेको छ । ‘अ’, ‘आ’, ‘इ’, ‘ओ’ जस्ता स्वरवर्णको आधिक्यमा तिनले प्रयोग गरेको भाषामा रोचकता मात्र पाइन्न, लेखकको चलाखी पनि भेटिन्छ । कतिपय अश्लील मानिएका शब्दको प्रयोगलाई आवरण दिन यी स्वरवर्णले सजिलो बनाएको छ ।
हंसले पुंसत्व र नारीत्वका अनेक भाष्य पनि उजागर गरेको छ । म पात्रलाई राष्ट्रवादीजस्ता मित्रले गरेको व्यवहारबाट पितृसत्ताले पुरुषलाई पनि कसरी शोषण गरेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । माया र सीमाका कथामा नारी स्वरका अनेक रूप भेटिन्छन् । समग्रमा भन्दा मानवकेन्द्रित विश्‍वदृष्टिलाई थोरै ओझेलमा पारेर प्रकृति र पर्यावरणका विषयलाई हंसले केन्द्रमा ल्याउन खोजेको छ ।
मानवीय चेतनाको आयातन फराकिलो पार्ने पर्यावरणीय चेतना नेपाली आख्यानमा सघन रूपमा खन्याउन सक्नु र अनेक मुद्दालाई सरल भाषामा समेट्न सक्नु यसको उपलब्धि बनेको छ । चरित्रको प्रगाढता मानवको कथामा पाठकले जति सजिलोसँग प्राप्त गर्छ हाँस र अन्य पक्षीका चरित्रलाई उति प्रगाढ स्मृतिमा राख्न पाठकलाई हम्मे नै पर्ला । लेखकले पक्षीको चरित्रलाई अझ विशेष बनाउन नसकेको भए जस्तो पनि लागिरहन्छ पढिसक्दा ।
‘घनचक्कर’ को उलपुलटमा आख्यानको जटिल तह बुनेका बौद्धिक लेखक सञ्जीव उप्रेतीको यो उपन्यास सरल लेखन हो । ‘घनचक्कर’ पागलपनको विषयमा केन्द्रित थियो र स्वाभाविक रूपमा भाषा पनि जटिल नै थियो । तर ‘हंस’ मा प्रेमको विषय प्राथमिकतामा छ ।
यस उपन्यासले मानिस र प्रकृतिमा रहने अनेक प्राणीको प्रेमलाई समभावमा हेर्न र बुझाउन खोजेको छ । मानव, हाँस, सर्प, वृक्ष आदिमा रहने प्रेमका विषयलाई उपन्यासमा रोचक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । साथै प्रेमकै कारण उपन्यासमा सम्बन्धका अनेक रूपले मानवमा उत्पन्न हुने डाहा, ईर्ष्या, छटपटी, हिंसात्मक मनोवृत्ति आदि अनेक संवेगको पनि चित्रण गरिएको छ । प्रेम संसारमा सबैले बुझ्ने विषय हो र यसको भाषा सरल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उपन्यासमा छ ।
हेमिङ्गवेको ‘ओल्ड म्यान एन्ड द सी’ को विषय पनि उपन्यासमा ल्याउनुमा यही उद्देश्य देखिन्छ । सरल शब्द र वाक्य रचनाले सबै तहका पाठकले बुझ्ने उपन्यास लेखिएको छ । वास्तवमा प्रेमको भाषा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ पनि यस उपन्यासले संकेत गरेको छ । त्यसैगरी संसारमा मानिस र प्राणीमा हुने प्रेम उस्तै हो भने यिनका भाषा एक अर्काले बुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन् त भन्ने संवेदनशील पर्यावरणीय पक्षलाई पनि उपन्यासमा उठाइएको छ । आख्यानमा लोककथाको शैली पनि गाँसिएको छ जसले सरल भाषाको अपेक्षा गर्दछ ।
प्रकृतिको नजिक गई तिनको सूक्ष्म अध्ययन गरी फरक विषयमा आएको यो आख्यान रोचक र समय सान्दर्भिक छ । नेपाली साहित्यमा पर्यावरणीय पक्षसहितको नयाँ विश्वदृष्टिले यो कृति महत्त्वपूर्ण छ । गहन पर्यावरणको विषय, प्रेमको प्राकृतिक र ब्रमाण्डीय स्वरूप, लोककथात्मक र स्वैकल्पनात्मक शैलीको संयोजन तथा कथानकको कौतूहलपूर्ण बुनोट यस उपन्यासका शक्ति हुन् ।
उपन्यासमा हाँसको कथा बूढी आमैले सुनाउँछिन् तर पढ्दै जाँदा समाख्याता मपात्र नै यसमा मिसिन्छ । यसले घरीघरी पाठकमा अलमलको स्थिति पैदा पनि हुन्छ तर प्राणी र वनस्पतिको रोचक मानवीकरण र तिनको फरक भाषाको निर्माणले उपन्यासमा रौनक थपेको छ । जम्मा १२ ओटा छोटा छोटा खण्डमा संरचित उपन्यास २१९ पृष्ठमा रहेको छ र छोटैमा मानिस र अन्य प्राणीका धेरै कथा कथेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ १०:२८